» चाडपर्वमा कस्ता खानेकुरा खाने, कस्ता नखाने ?
चाडपर्वमा कस्ता खानेकुरा खाने, कस्ता नखाने ?
३० असोज । चाडपर्वमा हामी मनलाग्दो खान्छौं । त्यसमाथि दशैं जस्तो पर्व । अर्थात मासु खाने पर्व । थरीथरीका मासु खाइने नै भयो । त्यसमाथि आफन्त, इष्टमित्रकहाँ आयोजना गरिने जमघट र भोजभत्तेरले पनि हाम्रो पेट खाली राख्न दिदैन । बरु, आवश्यक्ताभन्दा बढी खाइदिन्छौं ।
यात्राको क्रममा, अझ लामो यात्रामा पेट दुखे के गर्ने ? यात्रा नै खल्लो हुन्छ । दशैंको उल्लास नै हराउँछ । त्यसैले यतिबेला खानपानमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
पेट दुख्ने समस्याले यदाकदा तपाईं हामीलाई सताउन सक्छ । खासगरी अस्वस्थ खानेकुराको सेवनले पेट दुख्ट सक्छ । कुनै स्वास्थ्य समस्याको कारणले पनि पेट दुख्ने गर्छ । यस्तो अवस्थामा पेटको दुखाईलाई ठिक गर्न के गर्ने ?